“Liibiya Waxay Ku Sii Siqaysaa Jidkii ay Martay Soomaaliya….”The Gurdian |
“Liibiya Waxay Ku Sii Siqaysaa Jidkii ay Martay Soomaaliya….”The Gurdian
Liibiya ayaa waxa lagu tilmaamayaa in ay si aayar si aayar ah u noqoneyso Soomaaliyada badda Meditereanian-ka.Markii laga xoreeyay Liibiya Col Qadaafi waxa la filayay in ay noqoneyso shaki la’aan meesha ugu mustaqbal fiican dowladihii ka dhashay gu’gii carabta.
Haseyeeshee siyaasadihii Liibiya waxa si dhaqso ah u hadheeyay dagaal ay ugu tun weynaayeen weynaayeen laba kooxood oo ahaa kuwii ugu abaabulnaa, islaamiyiinta oo dhinac ah iyo dhinaca kale oo ahaa shakhsiyaad taabacsanaan jiray Taliskii hore ee Qadaafi.
Taasi waxa ay keentay in ay soo baxaan mowjado iska horimanaya.Qabyaalada ayaa aasaas u ah siyaasadda Liibiya, waxaana ka abuurantay isbaheysiyo iyo naceyb is bed-bedelaya.
Argagixisada ayaa iyana soo shaac baxdey, waxaana ay noqotey xaqiiqo jirta kacdoonkii ka dib. Caasimada Tripoli, waxa naafeeyay qalalaase saameeyay baarlamaanka iyada oo riyadii kacaanku si dhakhso ah isugu rogtey sas iyo cabsi.
Maleeshiyaadkii xoogganaa ayaa diiday in ay hubka dhigaan oo ay taa beddelkeeda noqdaan siyaasiyiin leh xuquuqdooda.
Siyaasadihii Liibiya waxay baaqi ku noqdeen kuwo dabin ku jira ah jawi shaki iyo aamin darro uu beeray Qadaafi oo xukunka soo hayay in ka badan afartan sanno oo uu qabiil-ba ka horgeeyay qabiil kale.
Markii NATO ay dagaalka ku qaaday kacaankii Qadaafi, waxa ay Mareykanku fadhiisteen xagga dambe, waxaana wadaagayay doorkii hoggaaminta Ingiriiska iyo Faransiiska. Haseyeeshee markii uu dhammaadey kacdoonkii waxa far yaro ka baxey David Camaron.
Sannadkii hore markii guddida arrimaha dibaddu ugu baaqdey Camaron inuu tafaasiil ka bixiyo qorshihii Ingiriiska ee Liibiya, waxa uu ku wargeliyay in aanu u heyn jidwal uu kula kulmo.Dhinaca kale diblomaasiyiinta ayaa ku adkeysanayay in hoggaamiyeyaasha Liibiya ay albaabada u xidheen wax kasta oo lagu doonayay in loogu fidiyo taageero.
Aakhirkii London waxa y ku baraarugtey sannadkii hore iyada oo dadka wax tahriibiyaa ka faa’iideysteen qalalaasaha oo ay ka sameysteen ganacsi tanaadey, islamarkaana ay meesha is keentay ISIS.
Ingiriiska oo ay weheliyeen Mareykanka iyo Talyaaniga ayaa ahaa gacanta muhiimka ah ee ka dambeysa dowladda dhibaateysan ee heshiiskii qaran ee ay abuurtey komishankii ay hoggaamineysay QM December-tii hore.
Dowladdaasi oo aan la jecleyn, isla markaana aan cidi doorani waxa ay ku guul-dareysatay in ay dhisato ciidan suga ammaanka oo ay leedahay waxaaney ku tiirasatey maleeshiyaad iska horjeeda oo ku mashquulsan dagaal dhexdooda ah.
Haddaba, qabshadii uu janaraalka xoogga badan ee Khalifa Haftar toddobaadkan ku qabsadey dekedaha muhiimka ah ayaa soo gudhisay rajadii dowladda cusub, waxaana ay haatan weydey dhaqaalihii saliida.
Dhacdooyinkaasi oo dhami waxa ay ka dhigeen Liibiya kelmadihii uu ku tilmaamey ergeyga gaarka ah ee Ingiriiska u qaabilsanaa , Jonathan Powell ee ahaa “Liibiya waxa ay ku sii si qeysaa in ay noqoto Soomaaliyada badda Mediterranean-ka.”
Halkan Ka Daawo Xukuumada Farmaajo ee Sharciyadu Ka Dhamaatay oo…
Halkan Ka Daawo Hawl Wadeenada Kastamanka Kalabaydh oo Abaal Marino…